महासचिव कमरेड विप्लवको राजनीतिक भेटघाट र यसका तरङ्ग – eratokhabar
ई-रातो खबर २०७८, ११ साउन सोमबार ०७:४२ July 26, 2021 3749 Views
लेखक : असल क्षेत्री
भेटघाट कुनै अपवित्र उद्देश्य राखेर गरियो वा क्रान्ति आन्दोलन र राष्ट्रिय हितको महत्वलाई अगाडि बढाउने पवित्र चाहनाले अग्रसर रहेर गरिएको हो, यो प्रश्न नै सर्वाधिक महत्वको रहने गर्छ । सारमा भन्दा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव कमरेड विप्लवले गरेको राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँगको भेट देश, जनता र राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको पवित्र भेट हो भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यो प्रचण्डले २०६३ ०६४ तिर गरेको भेटजस्तो हैन, कुनै कोणबाट पनि यो भेटलाई त्यसरी बुझ्न सकिँदैन, बुझ्नु हुँदैन पनि । यो एकीकृत जनक्रान्तिको विचार र अहिले निर्माण गरिएको प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमतसङ्ग्रहको कार्यनीतिअनुरूप पार्टीले निर्णय गरेर गरिएको भेटघाट र छलफल हो । पार्टीहरूले देश, जनता र राष्ट्रहितका विषयमा के सोचिरहेका छन् ? राजनीतिक अस्थिरता र संसदीय प्रणाली असफल भै अदालतका निर्णयहरूले देश सञ्चालन हुने स्थितिमा अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूको बुझाइ र नियति बुझ्नु पनि जरुरी थियो । नेकपाले राज्यसँग गरेको तीनबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा सरकार बदलिएर बनेको सरकार र त्यससँग संबन्धित राजनीतिक नेताहरूको बुझाइ र त्यसको कार्यान्वयनको विषय पनि कम महत्वको विषय हैन । तीनबुँदे सहमति कुनै राजनीतिक शक्ति वा व्यक्तिसँग नभएर राज्यसँग गरिएको विषय भएको हुनाले त्यसको स्वामित्व पनि अहिले बनेको सरकारले लेओस् भन्ने चाहनासहित यो भेटघाट जुरेको हो ।
पहिलो भेट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट नै जुर्यो । यो एउटा संयोगको कुरा मात्र हो । भेट अनिवार्य पनि थियो । विप्लव कमरेडले पार्टी निर्माण गरेपछि भेटको अवसर जुरेको थिएन । भेट नभएको पनि करिब एक दशक भैसकेको थियो । भेट विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्यसहितको भए पनि वातावरण अलि भावनात्मक पनि बन्न पुग्नु स्वाभाविक नै हो । क. विप्लव र प्रचण्ड जनयुद्धमा सँगै हुँदा एउटै परिवारजस्तो गरेर रहेको कारणले पनि हुनुपर्दछ वातावरण अलि विप्लवप्रतिको अपेक्षासहितको भावनात्मक बन्न पुग्यो । अर्को कुरा सीता दाहालको स्वास्थ्यस्थिति र क. विप्लवलाई अँगालो हालेर सद्भावपूर्ण स्नेह र उनको शारीरिक अवस्थाले झन् सबैलाई उद्वेलित र भावुक बनायो । प्रचण्डको राजनीतिक स्खलनले पैदा गरेको असन्तुष्टिले गर्दा केही तरङ्ग र आक्रोश पनि पैदा हुन्थ्यो । जनयुद्धमा जस्तो प्रचण्डमा कुनै उत्साह देखिन्नथ्यो । यो पङ्क्तिकार पनि आफैँ त्यसको प्रत्यक्षदर्शी भएको र यो सब आफ्नै अगाडि देखेको घटना र वातावरण भएकाले यो कुनै बनावटी कुरा भएन । प्रचण्डमा पश्चाताप भएको पनि हुनुपर्छ । आत्मग्लानिले घर गरेको हुनुपर्छ । राजनीतिक, सामाजिक अवस्था, नेकपाले निर्माण गरेको कार्यदिशा, अहिले असफल सिद्ध बन्दै गएको संसदीय व्यवस्था र त्यसले नेपाली राजनीतिमा निम्त्याएका जटिलताहरूका साथै त्यसको समाधानका विषयमा क्रान्तिकारी दृष्टिकोण महासचिव कमरेडले प्रस्तुत गर्दा उद्वेलना र भावुक प्रचण्डको भावाकृति हेर्नलायक थियो र सुन्नलायक विषय बनेको छ । जनयुद्धका कुशल क्रान्तिकारी सर्वोच्च कमान्डरको विसर्जन र क्रान्तिप्रतिको धोकाले उनको राजनीतिक जीवन नै सखाप बनाएको छ । भावनात्मक रूपमा कहिलेकहीँ धेरै पीडाको विषय पनि बन्ने गरेको छ ।
वर्तमान राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता, अन्योल र संसदीय व्यवस्था असफल भएको कुरामा प्रचण्ड पनि विश्वस्त (कन्भिन्स) हुनु राम्रो कुरा हो । अहिलेको व्यवस्थाको समाधानका रूपमा नेकपाले अगाडि सारेको कार्यनीतिक नारा संयुक्त प्रगतिशील सरकार र जनमतसङ्ग्रहका विषयमा चासो, जिज्ञासा र आशावादी बन्नु ।
अहिलेको क्रान्तिको प्रयोग प्रगतिशील संयुक्त सरकार र जनमतसङ्ग्रहको नाराबाट व्यक्त भैरहेको छ । सबैखाले प्रयोगहरूलाई रचनात्मक र सिर्जनात्मक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार र दलालीको दलदलमा फसेका कथित नामधारी कम्युनिस्टहरूवाट पनि धेरै ठुलो अपेक्षा गर्नु हुँदैन तर भ्रमबस वा भुलबस रहेका त्यहाँभित्रको क्रान्तिकारी पङ्क्तिलाई एकताबद्ध र ध्रुवीकृत गर्दै लैजाने र क्रान्तिकारीहरूको दायरालाई विशाल बनाउने अभियानलाई क्रान्तिकारी पङ्क्तिले प्राथमिकतामा राखिराख्नुपर्छ । क्रान्तिकारी कार्यदिशा र नेतृत्वमा कुनै पनि सम्झौता नहुने गरी कतिपय व्यक्ति र शक्तिसँग एकता गर्न पनि सकिन्छ । क्रान्तिकारी कार्यदिशा, नेतृत्व र पार्टीलाई कसैको पोल्टामा बुझाउने गरी, क्रान्तिलाई तिलाञ्जली दिने गरी कुनै–कसैसँग एकता गर्न सकिँदैन, सम्भव पनि छैन । क्रान्तिकारी नेतृत्व विचार र पार्टीबिना क्रान्ति र परिवर्तनको कुरा सम्भव कुरा हैन । एक्काईसौँ शताब्दीमा विज्ञान र प्रविधिलाई सही ढङ्गले बुझेको नेतृत्व र एकीकृत क्रान्तिको विचारले मात्र अहिलेको संसदीय व्यवस्थाको विकल्प दिनसक्छ । त्यो भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हो । यसमा हाम्रो पार्टी नेतृत्व प्रस्ट छ । यसबाट कोही पनि आशङ्कित हुनु हुँदैन । कि अन्ध विरोध गर्ने कि अन्ध समर्थन गर्ने पुरानो गएगुज्रेको स्कुललाई भत्काएर रचनात्मक बन्नु आजको क्रान्तिको आवश्यकता हो । हाम्रा लक्ष्यहरूलाई असम्भव र सुदूरभविष्यको विषय नबनाएर उज्ज्वल र सुन्दर भविष्यको सुन्दर सपनासहित सबै क्रान्तिकारीहरू एकढिक्का हुने हो भने वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रै अगाडि छ, सम्भव छ ।
हेटौँडा वडा नं ४ को चौथो पूर्ण बैठक सम्पन्न
नेकपा कञ्चनपुरको बेल्डाँडी गाउँकमिटीको बैठक सम्पन्न
२०७८, ७ असार सोमबार १५:३४
२०७८, २ बैशाख बिहीबार ०८:४२
२०७५, ८ फागुन बुधबार १३:२८